Soosaarayaasha Jawharad Luul | Shiinaha Pearl Jewelry Warshad & Shirkado
Silsiladda suufka luulka biyaha qabow
3-lakab jijin luul fresgwater
Jijimadu waxay ka samaysan tahay kuul luul dabiici ah oo dabiici ah. Caddaan dabiici ah, casaan, midab miro guduud ah oo luul ah. Dhererku waa 8 inji cabbirka waa la hagaajin karaa. Haddii aad baahiyo kale qabtid, waxaan ku siin karnaa luul biyo macaan oo qaabab kala duwan leh, oo ay ku jiraan luul kale oo midab leh. Sidoo kale waa la habeyn karaa Haddii aad xiisaynayso, fadlan si xor ah nala soo xiriir. Shirkadeenu waxay leedahay in kabadan 20 sano oo khibrad sameynta dahabka ah, waxayna leedahay khibrad badan iyo tikniyoolajiyad farsamo leh soo saarista jawharad kala duwan, luul, dahab iyo dahab dahab
Kitty cute wareega dahabka dahabka ah
7mm Wareegta Freshwater Pearl Jumlad, Wareegtada Madow ee Madow
Jawhar biyo macaan ayaa ka mid ah luulka la madoobaaday, kaas oo ka kooban la'aanta midabka luul biyo macaan oo dabiici ah. Kuullada dahabka ah waxay ka dhigayaan jijimadda mid aan fududayn, dhanka kale hagaajinta luul ma dhici doonto. Jijimadu waxay ka samaysan tahay 7mm luul biyo macaan oo wareegsan iyo 925 qalin, dahab lagu beeray, midabku wuxuu u muuqdaa mid aan is burineynin. Jawarku waa madow yahay, laakiin wuxuu umuuqdaa buluug digaag oo meel fog ka socda. Midabada quruxda badan ayaa indhaha dadka ku qaban kara isla markiiba.
Fashion Freshwater Pearl Brooches Shell & Dahab Dahabka Arooska Aroos Wanaagsan Zircon Ubax Brooch Biinanka Haweenka
Biinankaani waxaa lagu sameeyay luul dabiici ah, hooyo luul iyo naxaas. Qaabka ubaxa wanaagsan wuxuu ku darayaa taabashada jilicsanaanta qofka xiran. Biinanka jilicsan ayaa aad ugu habboon guga. Markay wax waliba soo kabtaan, ubaxyada dhirta iyo dhirtu way is dhammaystiraan, sidii iyagoo midba midka kale uga jawaabayo gu'gii ayaa yimid. Biinankaani wuxuu adeegsadaa badhanka kuul luul, oo si buuxda uga tarjumaya quruxda luul aan waxyeello u geysan. Luulka iyo Taranka ayaa isku dhow in la isku daro, taas oo dadka ka dhigaysa mid aan lakala garan karin.
Gacan lagu hagaajin karo Gacmo-biyood luul
Jijimadan ayaa loogu talagalay furitaanka, sidaa darteed waxay aad ugu habboon tahay qof walba inuu xidho, mana ka dhigi doono dadka inay dareemaan ciriiri. Qalabka Pearl wuxuu ku darayaa qurux dumar, sidoo kale jijimadu uma eka mid kaligiis ah. Labada luul ee ku dhow dhow waxay muujiyeen taxaddar yar. Xitaa haddii aad gacantaada wareejiso oo aad wax qaadato, dadka kale waxay ku arki karaan dahabkan furaha ah ee muhiimka ah jaleeco.
Dabcan, waxaa sidoo kale lagu beddeli karaa midabbo kale oo luul ah, sida casaan, guduud, iyo miro guduud, tanina waxay ku saleysan tahay doorbid shaqsiyeed. Laakiin sidoo kale waxaan fiiro gaar ah u leenahay dhibaatada midabeynta midabaynta.
Dhalasho Dhab Ah Dhaqan Biyo Macaan, Aaa Biyo Macaan, White Gray Freshwater Pearl, Hilqado Pearl Pear, Hadiyadaha Gabdhaha Freshwater Pearl, Hilqado Aroos,